Smashwords – Zvino Iwe Zvawaberekwa Patsva – a book by Chris Oyakhilome
Zvino Iwe Zvawaberekwa Patsva
Makorokoto, wawana chipo chinongopiwa pachena cheruponeso rusingaperi rwawakawana pawakagamuchira Jesu Kristu saIshe noMuponesi wako. More
Makorokoto, wawana chipo chinongopiwa pachena cheruponeso rusingaperi rwawakawana pawakagamuchira Jesu Kristu saIshe noMuponesi wako.
Ndinoda kugoverana newe chokwadi chakamisa kutenda kweChikristu. Chokwadi pachiri unogona kuvaka hupenyu hwakasimba, hunofadza muna Kristu. Nyatsodzidza zvakanyorwa mubhuku iri zvigokubudisira goho risingaperi.
Tags: christian life christian book christian gift christian god book christian christian help christian mind christian hope